Fitaterana: nitombo ireo zotra nampiakatra saran-dalana 500 Ar | NewsMada
Fitaterana: nitombo ireo zotra nampiakatra saran-dalana 500 Ar
Par Taratra sur 03/09/2018
Nanomboka ny asabotsy teo, nitombo ireo zotra nampiakatra ny saran-dalana ho 500 Ar eto Antananarivo. Efa nanao peta-drindrina 15 andro mialoha izy ireo ho fampahafantarana ny mpanjifa izany fiakarana izany.
Hentitra ihany koa izy ireo fa tsy misy intsony ny saran-dalana 200 Ar ho an’ny tapa-dalana na akaiky aza ny aleha fa tsy maintsy 300 Ar avokoa izay tapa-dalana rehetra.
Niteraka resabe eo amin’ny mpandeha io fampiakarana saran-dalana io, saingy tsy nanaiky lembenana mihitsy koa ireo mpamily sy ny mpanampy azy tamin’ny fitakiana ny 500 Ar.
Tsiahivina fa efa malalaka amin’ny fampiakarana saran-dalana ireo kaoperativa rehetra, araka ny tapaky ny fivoriana nataon’ny UCTU tamin’ny herinandro teo. Samy manana ny fotoana hampiakarany izany izy ireo. Kaoperativa 12 sisa tsy hampiakatra saran-dalana fa hiandry ny “compensation” avy amin’ny fanjakana.
Mahatsiaro tena ho tsy misy mpiahy ireo mpitatitra manoloana ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy misy fetra. Milaza ny ho matiantoka izy ireo amin’izany ka ny fampiakarana ny saran-dalana sisa hany vahaolana.
Tsy voaloa ara-dalàna rahateo ny “compensation” ary mbola betsaka ny trosa any amin’ny fanjakana ka mitady vahaolana izy ireo hanarenana ny fatiantoka. Tsy hijanona eo, araka izany, ity fampiakarana saran-dalana ity fa mbola hiitatra amin’ny zotra hafa.
Ho an’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa, tsy misy afa-tsy ny fampidinana ny vidin-tsolika ny vahaolana hahafahana mitazona ny saran-dalana ho 400 Ar.